Wonder low low ago — Steemit
Wonder low low ago
Wonder ရှည်လျားသောအသကျရှငျဘုရင့်အမွေထိန်းထိန်းသိမ်းသိမ်းအဘို့အကာထောက်ခံသူဖြစ်ခဲ့သည်။ 1980 ခုနှစ်တွင် Wonder မင်းကြီးသည်တစ်ဦးအခွန်ဆက်အဖြစ်သီချင်းကို "မင်္ဂလာမွေးနေ့" ဖြန့်ချိခြင်း, ဘုရင့်မွေးနေ့တစ်ရုံးပိတ်ရက်အောင်ရေးဦးဆောင်လှုံ့ဆော်။
ကြော်ငြာခြင်း Teads တီထွင် inRead "ကျနော့်ရဲ့အိပ်မက်ကျနော်တို့ငါ့သားသမီးတို့သည်အနာဂတ်ရှိသည်ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီကတခြားနှင့်ကမ္ဘာအဘို့ဂရုစိုက်ဖို့သင်ယူသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။
King ရဲ့နာမည်ကြီးမိန့်ခွန်း "ကျွန်မတစ်ဦးကအိပ်မက်ဖူး" ကိုတစ်ညိတ် - အဆိုပါ tweet အိုဘားမားနှင့်ထိုကဲ့သို့သောဘုံ, Bette Midler, Billy Crystal အဖြစ်နာမည်ကြီးတွေမိမိတို့ကိုယ်ပိုင်အိပ်မက်အကြောင်းကိုပြောဆိုသောအရာအတွက်ကြယ်ပွင့်-ထားတဲ့ဗီဒီယိုရောက်လာတယ်။
Stevie Wonder တွစ်တာပူးပေါင်းခဲ့ပြီးသူ၏ပထမဆုံး tweet စိတ်ပျက်ခဲ့ပါဘူး။ မိမိအဖွင့် tweet အတွက်ဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်ဒေါက်တာမာတင်လူသာကင်းမှအခွန်ဆက်ပေးဆောင်အဆိုပါဂရမ်မီဆုရှင်စူပါစတားမကြာမီ 8 p.m. ပြီးနောက် posted ET ။ အဆိုပါ tweet ၏အချိန်ကိုက်အရပ်ဘက်အခွင့်အရေးများခေါင်းဆောင်ငါးဆယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းသေပြီအသံထွက်ခဲ့သည်ယခုအချိန်တွင်အတူတိုက်ဆိုင်မှပေါ်လာသည်။
သူကနောဖပြည်၌အတွက်လုပ်ကြံခံရခင်ကဘုရငျငါးနှစ်မိန့်ခွန်းကယ်နှုတ်တော်မူ၏။ "7:05 p.m. အလယ်ပိုင်းအချိန်ကဧပြီလ 4, 1968 တွင်ဒေါက်တာ King ရဲ့အသက်တာကိုဝမ်းနည်းစရာကောင်းတာကတိုတိုဖြတ်ခဲ့သည်။ သူ၏အိပ်မက်မပြည့်စုံစေခြင်းငှါအဘို့အနှစ် 50 ကြာပြီးနောက်တစ်ဦးလိုအပ်ယခင်ကထက်ဝေး သာ. ကြီးမြတ်သည်," Wonder ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က Tweet လုပ်ခဲ့။ "သင်၏အိပ်မက် Share & သင့်ကိုယ်ပိုင် #DreamStillLives ကဗီဒီယို post ။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြန့် ... ပြန့်ပွားမျှော်လင့်ချက်။ " ဗီဒီယိုအခွန်ဆက်နှငျ့အတူသူ့ကိုကူညီပေးဖို့နိုင်ငံရေး, အားကစား, စီးပွားရေး, ဂီတနဲ့ဖျော်ဖြေရေးကနေနာမည်ကြီးမိတ်ဆွေဟာ host ခေါ် Wonder ။ Kamala Harris က, Dave ချာပယ်လ်, Warren Buffett က, ဘွန် Jovi, Katy Perry, Serena Williams နှင့် Smokey Robinson ကလည်းငါးမိနစ်ဗီဒီယိုမှာပွဲလုပ်လေ၏။ အရေးယူမှ Wonder ၏ခေါ်ဆိုမှုအတွက် #DreamStillLives hashtag နှင့်အတူ၎င်းတို့၏အိပ်မက်များမျှဝေဖို့တွစ်တာအသုံးပြုသူတစ်ဦးစီးသတိပေးခံရ။
ငါဥစ္စာကိုနားထောငျဖို့ကိုချစ်ချင်ပါတယ်," ဂီတပညာရှင် Dave Matthews ကတရားဝင် Dave Matthews က Band အကောင့်မှ Tweet လုပ်ခဲ့။ Matthews ကလည်း Wonder ၏ဗီဒီယိုထဲမှာ featured ခဲ့သည်။
Stevie Wonder twittar puupaungg hkaepyee suueatpahtamasone tweet hcatepyet hkaeparbhuu . mimiahpw ng tweet aatwat buddhahuunaetwin douttar martainluusarkainn mha aahkwan saat payysaung aasopar garamme sushin hcuupar hcatarrmakyaarme 8 p.m. pyeenout posted ET . aasopar tweet eat aahkyanekite aarautbhaat
aahkwinaarayymyarr hkaunggsaung ngarrsaal lwanhkaetae nhaitpaungg saypye aasanhtwat hkaesai yahkuaahkyanetwin aatuu titesine mha pawlarsai . King rae narmaikyee meinhkwann " kyawanm tait u k aiutmaat hpuu" ko tait nyate - aasopar tweet aobharrmarr nhaint htokaeshoetsaw bhone, Bette Midler, Billy Crystal aahpyit narmaikyeetway mimithoet kopine aiutmaat aakyaunggko pyawwsosawarar aatwat kyaal pw int- htarrtae bedeyo routlartaal . suu k naw hp pyi aatwat lotekyaanhkanr hkain k bhur ngya ngarrnhait mein hkwann kaal nhuat tawmuueat . "7:05 p.m. aalaalpine aahkyane kepyel 4, 1968 twindouttar King rae aasaat tar ko wamnaeehcarar kaunggtark to to hpyat hkaesai . suueat aiutmaat m pyany hcone hcay hkyinn nghaarabhhoet aanhait 50 kyaarpyeenout tait u loaaut yahkainkahtaatwayy sar. kyee myat sai," Wonder buddhahuunaek Tweet lotehkae . " saineataiutmaat Share & saintkopine #DreamStillLives kabedeyo post . hkyithkyinnmayttar hpyan ... pya ant pwarr myahaaw laint hkyet . " bedeyo aahkwan saat nhangya aatuu shuko kuunye payyhphoet ninenganrayy, aarrkahcarr, hceepwarrrayy, get nae hpyawhpyayrayy k nay narmaikyee mateswayhar host hkaw Wonder . Kamala Harris k, Dave hkyaar paal l, Warren Buffett k, bhwan Jovi, Katy Perry, Serena Williams nhaint Smokey Robinson kalaee ngarr minait bedeyo mhar pwal lote layeat . aarayyyuumha Wonder eat hkawsomhuaatwat #DreamStillLives hashtag nhaint aatuu ၎innthoeteat aiutmaatmyarr myahaway hphoet twittar aasonepyusuu tait u hcee satipayyhkanr . kyawngyaarhkyinn Teads tehtwin inRead " kyanaw rae aiutmaat kyanawthoet ngar sarrsamee thoetsai aanargaat shisai dar kyount tait u hkyinn hce k tahkyarr nhaint kambharabhhoet garuhcite hphoet sainyuu saw kwayarngya hpwhcyasanyya . ngar uhchcar ko narr htaw ngya hphoet kohkyit hkyinpartaal," getapanyarshin Dave Matthews katararrwain Dave Matthews k Band aakaungmha Tweet lotehkae . Matthews kalaee Wonder eat bedeyohtellmhar featured hkaesai . Wonder shilyarrsawas kya shngya bhur intamway htein hteinsaim saimabhhoetakar htouthkansuu hpyithkaesai . 1980 hkunhaittwin Wonder mainnkyee sai tait u aahkwan saat aahpyitsehkyinnko " main g lar mwaynae" hpya ant hkyai hkyinn, bhur int mwaynae tait ronepateraat aaung rayy u saung lhuansaw .
Congratulations @goldbloger4! You have completed some achievement on Steemit and have been rewarded with new badge(s) :